I-Deep Groove Ball Bearings Ihlangana Nezidingo - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Ama-Deep Groove Ball Bearings Ukuhlangabezana nezidingo
Ama-bear groove ball bearings kufanele afakwe ngephethiloli noma i-diesel ngaphambi kokuhlanza, ukusetshenziswa okumile, nokuqinisekisa ukugcoba okuhle, ukubhebhetheka kwebhola ejulile kusetshenziselwa ukugcoba, futhi kungasetshenziswa ukugcoba ngamafutha. Uma usebenzisa ukugcoba kwamafutha, akufanele kusetshenziswe ukungcola, ukulwa ne-oxidation, i-rust, ukucindezela okukhulu kanye nokusebenza okuhle kakhulu kwamafutha. Gcoba ivolumu yokugcwalisa ama-ball bearing and deep groove ball bearing bearing volume of 30% -60%, akufanele kube kakhulu. I-groove ball ebhekene ne-seal structure igcwele amagesi, umsebenzisi angasebenzisa ngokuqondile, ayikwazi ukuhlanzwa.
I-deep groove ball bearings ifakiwe, ama-bear groove ball bearings kufanele abe ngumbuthano ekujikelezeni kwesimo sokusetshenziswa kwesilinganiso esilinganayo, umshini wokugcoba, hhayi izintambo kanye namanye amathuluzi ngokuqondile ukushaya ubuso obunzima bokubheja ibhola, ngakho-ke ukulimaza ukujula kwebhola elijulile. Uma kwenzeka ukuphazanyiswa okuncane, kungasetshenziswa ekamelweni lokushisa ngomkhono wokuvimbela ukuvala ibhola ejulile ebhokisini lokugcina, inhloko yomkhono, ngokusebenzisa umkhono uzongena ngendlela efanayo ring. Uma ukufakwa kwezinto eziningi, ungasebenzisa imishini yokucindezela. Uma ucindezelekile, kufanele uqinisekise ukuthi ubuso bokuphela kwendandatho yangaphandle kanye nobuso begobolondo, ubude bezinsimbi zangaphakathi kanye ne-shaft ebhekene nokucindezela ubuso, abavumelani negebe.
1. Ukulinganisa ubukhulu be-shaft ne-deep groove ball bearing hole ukuze ubone ukuthi ukucaca kwebhola elijulile elibhekene nezidingo ezilandelayo: indandatho yangaphakathi kanye ne-shaft ukuthatha ukuphazamiseka, ukuphazamiseka okungu-0 ~ + 4 ¼m ( umthwalo wokukhanya, ukulungiswa okuphezulu 0); indandatho yangaphandle kanye ne-deep groove ball bearing hole ukuze ithathe igebe ngengozi ye-0 ~ + 6 ¼m (kodwa ekupheleni kwamahhala we-ball groove ebhethini ephethe ibhola lokuxhuma ebhodini elijulile, kodwa nokwandisa igebe) I-axis kanye nesihlalo ukuguqulwa kwamaphesenti angaphansi kwe-2½m, amabhethri amakhulu amabhola asetshenzisiwe ekupheleni kokulinganisa kwe-2 ¼m ngaphansi kwesiphetho sehlombe ebusweni bendawo yangaphandle yokushaya ku-2 ¼m ngaphansi; imifula ejulile ibhola elibhekene nebhola e-axis. Ukushaya okungaphansi kwe-4 ¼m; ukuphela kwangaphambili kwe-shaft enkulu ebhekene ne-axis yokushaya ngaphansi kwe-4 ¼m. 2. Ukufakwa kwebhola elijulile le-ball groove engxenyeni yokufakelwa: ama-bearings ebhola ama-ball groove ane-cleaner yokuhlanza ehlanzekile yokuhlanzwa ngokugcwele, ukugcoba amafutha, owokuqala oqukethe u-3% kuya ku-5% we-solvent engxenyeni ejulile. i-groove ibhola ephethe isikhala somthamo we-10% kuya ku-15%); Ukushisa ukushisa okujulile kwebhola lokubhebhethekisa ukushisa kwama-20 ~ 30 â "ƒ, bese usebenzisa i-grease ukuze ugcwalise ama-ball bearingings ejulile, Ngomshini wokufakelwa kwamanzi emgodini ojulile obhekene ne-shaft; umshini we-adapter emgodini kanye nokucindezela okufanele ngokumelene nebhola elijulile elibhekene nokuphela kwe-axial positioning; i-tape scale tape ehlanganiswe emgodini ojulile webhola ophethe iring yangaphandle (Ngisho noma ama-bear groove ball bearings ayilungile), ukulayishwa kwangaphambili kungashintshwa ngenxa yokwenziwa kwe-mating noma i-cage, ngokuhlola i-torque yokuqala ngendlela yokulinganisa i-torque yokuqala.